मलेसियामा को’रोनाले आ’जमात्रै एकैदिनमा ७९ जनाको मृत्यु, कति थपिए नयाँ संक्र-मित ? – Yuwa Aawaj
मलेसियामा को’रोनाले आ’जमात्रै एकैदिनमा ७९ जनाको मृत्यु, कति थपिए नयाँ संक्र-मित ?
जेठ १६, २०७८ आइतबार 1046
क्वालालम्पुर : मलेसियामा कोरो’ना भाइर’स (को’भिड-१९) ले संक्र’मित हुनेको संख्या ५ लाख ५८ हजार ५३४ जना पुगेको छन, भने संक्र’मणको कारण अहिलेसम्म मृ’त्यु हुनेको संख्या २७२९ जना पुगेको छ।
यहीँ मिति सन् २०२१ , मेय , २९ तारिख , शनिबारको दिन कोरो’नाको कारण थप ७९ जना नागरिकको मृ’त्यु भएकोले बढेर अहिलेसम्म जम्मा मृ’त्यु हुनेको संख्या २७२९ जना पुगेको हो।
आज मात्रै पुनः ६९९९ जना नयाँ सं’क्रमित फ़ेला परेको मलेसि¥यन स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यां’कमा उल्लेख गरिएको छ। जम्मा सं’क्रमित मध्य आज ५१२१ जना निको भएसंगै जम्मा ४ लाख ८२ हजार ३९५ जनाले उपचार सकिएर स्वास्थ्य लाभ लिई नि’को भैइसकेको मन्त्रा’लयको तथ्यांकले देखाउछ।
यता : विद्यादेवी भण्डारीले ‘खोप कूटनीति’ लाई निरन्तरता दिने क्रममा रुसी राष्ट्रपति भ्ला’दमिर पुटिनलाई पनि पत्राचार गरेकी छन् । उनले रुसले उत्पादन गरेको स्पु’तनिक–५ खोप सहयोगको लागि अनुरोध गरेकी हुन् ।
उक्त खो’पलाई नेपालको स्वास्थ्य सेवा विभागले पनि आ’पतकालीन प्रयोगको लागि मा’न्यता दिइसकेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले पुटिनलाई नेपाललाई खो’प ख’रिदको लागि सहजी’करण गरिदिनको लागि पत्र पठाएको परराष्ट्र मन्त्रालयका
एक पदाधिकारीले जानकारी दिए ।राष्ट्रपति कार्यालयले जेठ १४ गते (शुक्रबार) परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै पुटिनलाई पत्राचार पठाएको छ । तर उक्त पत्र मस्को’स्थित नेपाली राजदू’तावासले रुसको विदेश मन्त्रालयमा गएर हस्ता’न्तरण गर्न अझै बाँकी रहेको छ ।
यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले भा’रतीय राष्ट्रपति रामनाथ को’विन्द ,चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई पनि पत्राचार गरी नेपाललाई खो’प सहयोग गर्नको लागि अनुरोध गरेकी थिइन् ।
Prevमलेसियामा जारी हुने लक’डाउन अव’धीभर अवैधा’निक विदेशी श्रमिकलाई धरप’कड गरि प’क्राउ गरिने ।
Nextपर्सि देखि कतारमा नियमित उडान खुल्ने !
डब्ल्यूएचओका महानिर्देशकले ट्विट गर्दै भने : नेपालका स्वास्थ्यकर्मी ‘हिरो’ हुन् !
नेपालमा आउने मनसुनी प्रणाली भारतको केरलामा पुग्यो ।